Maxaabiis ka Baxsatay Xabsiga Dhexe Ee Laascaanood. | Awdalmedia.com
Maxaabiis ka Baxsatay Xabsiga Dhexe Ee Laascaanood.
Illaa 16 maxaabiis ah ayaa la la'yahay kaddib markii si xoog ah maxaabiistu ay uga baxsadeen gacanta ciidanka Asluubta gelinkii danbe ee maanta.
Illaa hada ma cada sababta ay maxaabiista ugu suuragashay in ay la wareegaan maamulka albaabka hore ee Jeelka oo ay u suura gasho in ay ka baxsadaan goobta iyadoo halkaa ciidan joogeen.
"Waxaan ogahay oo ke;iya in ay baxsadeen 16 maxbuus oo haatan la baadigoobayo, welina baadhitaan ayaa la wadaa wixii sababayna dib ayaan ka ogaan doonaa" sidaa HOL u sheegay Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirrir.
Taliyaha ciidamada Asluubta oo aan isku daynay inaan arinta wax ka weydiino waa suuroobi weydey, waxa se Taliyaha Qaybta Booliska G/sare C/risaaq Maxamed Faarax in taliyaha iyo ciidamo kale ku hawlan yihiin sababta arintan ku dhacday, jawaabtooduna waxa ay ku xidhan tahay waxa ka soo baxa.
Askari waardiye ahaa ayaa la sheegay in uu soo gaadhey dhaawac, sidoo kale maxbuus ayaa isna la sheegayaa, ilaa hada se jawaab looma hayo sababta keentay in maxaabiista oo isugu jira xukuno kala duwan ay awood ugu helaan in si sahal ah ku baxsadaan.